चार कम्पनीको १२ अर्ब रुपैयाँको हकप्रद शेयर पाइपलाईनमा, कसको कति ? – Insurance Khabar
(March 4, 2021)
चार कम्पनीको १२ अर्ब रुपैयाँको हकप्रद शेयर पाइपलाईनमा, कसको कति ?
प्रकाशित मिति : २८ पुष २०७७, मंगलवार ११:३५
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा ४ वटा कम्पनी हकप्रद शेयर निष्काशन तथा स्वीकृतिका लागि पर्खाइमा रहेका छन् । सेबोनमा हकप्रद शेयर निष्काशन तथा स्वीकृतिका लागि पाइप लाइनमा रहेका कम्पनीहरूमा ङादी ग्रुप पावर कम्पनी लिमिटेड, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, अरुण भ्याली हाइड्रोपावर र बरुण हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड रहेका छन् । यी चार कम्पनीको कुल १२ अर्ब ४१ करोड ४१ लाख ३९ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ बराबरको १२ करोड ४१ लाख ४१ हजार ३ सय ४६ दशमलव ४० कित्ता शेयर निष्काशन तथा विक्रीका लागि बोर्डको स्वीकृतिका लागि पर्खाइमा रहेका हुन् ।
ङादी ग्रुप पावर कम्पनी लिमिटेडः ङादी ग्रुप पावर कम्पनी लिमिटेडले १०ः३ को अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न २०७५ साल पुस २३ गते सेबोनमा निवेदन पेश गरेको हो । कम्पनीले एक सय रुपैयाँ अंकित दरमा चुक्ता पूँजीको ३० प्रतिशत अर्थात १६ करोड ६ लाख ६६ हजार ४ सय ४० रुपैयाँ बराबरको १६ लाख ६ हजार ६ सय ६४ दशमलव ४० कित्ता हकप्रद निष्काशन गर्न लागेको थियो । उक्त हकप्रद शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । उक्त हकप्रद दुई वर्ष पुरा हुँदा समेत स्वीकृत हुन सकेको छैन ।
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडः हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले १ः१ को अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न २०७६ साल असार ३१ गते सेबोनमा निवेदन पेश गरेको छ । कम्पनीले ११ करोड कित्ता हकप्रद निष्काशनको अनुमति मागेको हो । उक्त हकप्रद शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । कम्पनीको हकप्रद शेयरमाथि सेबोनले अध्ययन गर्दै गरेको जनाएको छ ।
अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनी : अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनीले एक बराबर एकको अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्काशन तथा विक्री गर्नका लागि २०७७ साल असोज २१ गते सेबोनमा निवेदन पेश गरेको थियो । अरुण भ्यालीले चुक्ता पूँजीको १०० प्रतिशत अर्थात ९९ लाख ८३ हजार २ सय ३२ कित्ता शेयर निष्काशन गर्नका लागि अनुमति मागेको छ । उक्त हकप्रद शेयर निष्काशन तथा विक्री प्रबकन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ ।
बरुण हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडः बरुण हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले १ः१ को अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न २०७५ साल जेठ २२ गते सेबोनमा निवेदन पेश गरेको हो । बरुण हाइड्रोपावरले पनि चुक्ता पूँजीको १०० प्रतिशत अर्थात २५ करोड ५१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको २५ लाख ५१ हजार ५ सय कित्ता हकप्रद निष्काशन गर्न लागेको हो । उक्त हकप्रद शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआइबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । उक्त हकप्रद शेयर समेत दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि सेबोनमै अल्झिएको छ ।
के हो हकप्रद शेयर ?
विगतमा सर्वसाधारणमा साधारण शेयर निष्काशन गरिसकेको कम्पनीले भविष्यमा पुनः साधारण शेयर निष्काशन गर्ने भएमा त्यसरी निष्काशन गरिने शेयरहरु खरिद गर्ने पहिलो हक विद्यमान शेयरवालाहरुलाई प्राप्त हुन्छ । यसप्रकार पुनः निष्काशन गरिने शेयरमा विद्यमान शेयरधनीको पहिलो हक हुने भएकोले त्यस्तो शेयरलाई हकप्रद शेयर भनिन्छ ।
हकप्रद शेयर खरिद गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्न विद्यमान शेयरधनीहरु स्वतन्त्र हुन्छन् । सबै शेयर बिक्री नभएमा कम्पनीले बाँकी रहेको शेयर लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गर्ने व्यवस्था छ । विद्यमान शेयरधनीले आफूले पहिले खरिद गरेको शेयरको अनुपातमा हकप्रद शेयर खरीद गर्ने अधिकार प्राप्त गर्दछन् ।
नेप्से ९० अंकले बढ्दा सबै उपसूचकमा छायो हरीयाली